30,000 Feet up - ကျွန်ုပ် #NABShow သို့သွားပါသည်။ @NABShow | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2019 NAB ပြရန် » 30,000 ခြေတက် - ငါ #NABShow ငါ့လမ်းအပေါ်ပေါ့! @NABShow
အဆိုပါ 2019 များအတွက် Las Vegas မှာ, Nevada - အခုတော့ငါသည်ငါ့လမ်းဖို့ "သိန်စီးတီး on", သုံးဆယ်-တထောင်ခွကေိုထလေထုထဲတွင်ပေါ့ NAB ပြရန်! ခါတိုင်းလိုအဖြစ်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုငါ့အဆင့်ကိုငါ့ကိုအခြေချ-down မသွားပါစေလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ငါလေယာဉ်ပေါ်မှာစဉ် blogging စတင်ဖွင့်! (ဤအဓိပ်ပါယျယခုတစ်အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည် !!!)
မှစ. "ကျွန်တော်ပုံပြင်ဒီမှာစတင်" (NAB ပြရန်'' s ကို 2019 များအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ), start-ချွတ်ကျနော်တို့လုပ်နေလုပ်နေအနည်းငယ်အရာဖော်ပြခြင်းဖြင့်ဖွင့်ပါစေ - NAB ပြရန် LIVE !!!
ဒါအမှန်ပဲ - NAB ပြရန် LIVE! ဗဟိုဗဟို Lobby မှာတည်ရှိပါတယ်, @NABShowStudio1 ၏စိတ်နှလုံးဖြစ်ပါသည် NAB ပြရန်'' s ကိုဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှု။ ၏ထုတ်လွှင့်ကိုမြင်ရဖို့အဘယ်မှာရှိလူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ထုတ်လွှင့်အသင်းများကို featuring, Studio1 ဖြစ်ပါသည် NAB ပြရန် Live! လူမှု meetups နှင့်ပြရန်အနုပညာရှင်တွေ့နေရ; တိုက်ရိုက်လွှ feeds တွေကို, On-The-ကြမ်းပြင် "လယ်ပြင်" အစီရင်ခံခြင်းနှင့် Studio1 ထုတ်လုပ်မော်ကွန်းတင်ပြီးပြပွဲအကြောင်းအရာများ - သတင်းနှင့်ပြသခဲ့သည်သတင်းအချက်အလက်များအပြင် - စည်းဝေးကြီးအလယ်ဗဟိုတလျှောက်လုံးနှင့်ထဲမှာ Show ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မျိုးစုံဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်လှည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာကွန်ယက်ပေါ်တွင်ပြသပါလိမ့်မည် [အီးမေးလျ protected] ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေးရှေးများစွာကိုတိုက်ရိုက်အဆင့်ပေါ်မှာနေစဉ်, i "လယ်ပြင်၌" ဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့ "ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ" - ကျွန်တော်တို့ကိုရှာ! မှာ Tune www.nabshow.com သို့မဟုတ်ဒီမှာမှာ broadcastbeat.com.
NAB ပြရန် ခေတ်သစ်မီဒီယာ၏ညှနျကွားရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ , အဖြစ်မှန်ကိုပြောင်းသမိုင်းထဲမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်, သင်၏စိတ်ကိုတိုးချဲ့။ အနာဂတ်မှာ၏လှိုင်းကို Join နှင့် virtual reality ကကမ်းလှမ်းကြီးထွားလာခွင့်အလမ်းများနှင့်ကမ္ဘာစူးစမ်း။
NAB ပြရန် တစ်ခုလုံးကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ဂေဟစနစ်အတူတကွဆောင်တတ်၏နှင့်ကြော်ငြာ, app ကိုဖွံ့ဖြိုးရေး, အတုထောက်လှမ်းရေး, audio လုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန်, ထုတ်လွှင့်, cable သည်မိုဃ်းတိမ်ဖြေရှင်းနည်းများ, ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယို, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်, eLearning, အီလက်ထရောနစ်အားကစား, ရုပ်ရှင်, ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး, အစိုးရအတွက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကကိုယ်စားပြုနေပါတယ် နှင့်စစ်ရေး, ဝတ်ပြုရာအိမ်များ, In-မော်တော်ယာဉ်ဖျော်ဖြေရေး, IOT, အိုင်တီ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်များ, ရောထွေးအဖြစ်မှန်, မိုဘိုင်း, အွန်လိုင်းဗီဒီယို, podcasts, post-ထုတ်လုပ်မှု, ရေဒီယို, လက်လီ, လူမှုရေးမီဒီယာ, အားကစား, streaming စနစ်ပေါင်းစည်းမှု, ရုပ်မြင်သံကြားကို virtual အဖြစ်မှန်, 5G နှင့်ပိုပြီး, အသိပညာရဖို့, ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုရှေ့ဆက်ဖို့ခြောက်ရက်ပတ်လုံးအဘို့အ Las Vegas မှာဆုံအတွေ့အကြုံကိုဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းသင်တန်း, နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်အတူလက်ရနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း trailblazers အနုပညာ, သိပ္ပံနှင့်အကြောင်းအရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ် ။
ခေါကျခေါကျ - ကဖွင့် SPROCKIT
အဆိုပါ SPROCKIT program ကိုကော်ပိုရိတ်များနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအမှုဆောင်အရာရှိများရေးစပ်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအသံလွှင့်သည့်တီထွင်မှု Spotlight ကိုကူညီပေးပါသည်။ ယင်းနှင့်အတူက, တစ်ဦးမှာ Bi-partition program ကိုဖွင့် NAB ပြပွဲ တစ်ဦးဟန်ပြအတူ SPROCKIT အစီအစဉ်ကိုပံ့ပိုး, နှင့် ထွက်သယ်ဆောင်သောအစီအစဉ်များသင်တန်းသားများအတွက်သီးသန့်အစည်းအဝေးများတစ် sequence ကို Los Angeles မြို့အဆိုပါဆီလီကွန်ဗယ်လီနှင့်နယူးယောက်မြို့။ ဒီတစ်ခါလည်းသင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ကြောင့်ဤအစီအစဉ်၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ကြာသောအရာကိုရှိပါတယ်! စုံစမ်းသည်!
အဆိုပါ NAB ရှိုးများ '' SPROCKIT အစီအစဉ်များ၏အဆက်မပြတ်အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးပြောင်းလဲနေသော handpicked က start-ups ၏ဟန်ပြအတူစက်မှုလုပ်ငန်းမှလတ်ဆတ်တဲ့စိတ်ကူးများဆောင်ကြဉ်းကူညီပေးသည်။ တခါတရံမှာအသစ်သောနည်းပညာများစက်မှုလုပ်ငန်းနှောင့်အယှက်ရန်အလားအလာရှိသည် ဖြစ်. , ကြောင်းထုတ်ကုန်ရဲ့အားသာချက်ဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဆက်စက်မှုလုပ်ငန်းစေခြင်းငှါမငြိမ်သက်မှုများတန်ဖိုးရှိလျှင်, အခွင့်အလမ်းတွေကို nextgen မီဒီယာနည်းပညာ SPROCKIT ဖြတ်သန်းလိမ့်မည်ဟုဖြစ်ကြသည်။ www.nabshow.com/show-floor/attractions-pavilions/sprockit
ညီလာခံစျြလြူမရှုပါ !!! ဤမျှလောက်သူတို့ကိုအတွင်းဆွေးနွေးကြောင့် Unreal ဖြစ်ပါတယ်ဤမျှလောက်များစွာသောရုတ်တရက် (နှင့်နောက်ဆုံးမိနစ်) ဧည့်သည်ပွဲရှိတယ်ပါ! စက်မှုလုပ်ငန်းရှယ်ယာလျှို့ဝှက်ချက်ကနေအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောစတူဒီယိုထဲကနေအမှုဆောင်အရာရှိလျှို့ဝှက်ချက်ပြီးနောက်များနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. bandied နေကြသည်ရုံလွန်းနာမတော်ရှိပါ! ဆုရဒါရိုက်တာများ, ပြပွဲအပြေးသမား, ဖန်တီးမှုသင်္ဘောသားများနှင့်စတူဒီယိုနဲ့ content ၏ Craft အပေါ်သူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုတင်ဆက်မှုများအတွက်ကွန်ယက်ကိုထုတ်လုပ်မှုအမှုဆောင်အရာရှိအဖွဲ့-Up ... စကားကိုနားထောငျဖို့သိပ်တွေ့မှဒါအများကြီး ...
အဆိုပါ "စိတ်လှုပ်ရှားမီတာ" ရုံ 100 hit ဖြစ်ပါတယ် - ကသာ 10 မှတက်သွားသည် !!! - ငါမသွားရရှိပါသည် - ဘာပဲသောကွောငျ့ဖွစျသညျ - လေယာဉ်အမှုထမ်း "လေယာဉ်ပျံ Mode ကို" တောင်းဆိုပွီ! ငါတကယ် (ကအရာထိုသို့ ???) ... အထဲကရှာတွေ့ရမယ် LOL - စနေနေ့အပေါ်6သငျသညျကွညျ့ရှုth... ဒါပေမယ့်တနင်္လာနေ့ဧပြီလ 8 အပေါ်ညှိ-in ကိုမှမမေ့မလြော့ပါth ဘို့ NAB ပြရန် LIVE!
... Wheeeeeee! Vegas မှာသင်မြင် !!!
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား 2019-04-01
ယခင်: တီဗီဒိုင်လူကြီးစနစ်များ (var) Assisted ဗီဒီယိုမှဗီဒီယို Delivery ဖြေရှင်းချက်ပေးပေါ်လာ
နောက်တစ်ခု: Apantac ယင်း၏အရောင်းရဆုံးမြင်ကွင်းစုံဖို့ HDMI 2.0 UHD ရလဒ်မျာထည့်ပေးသည်